Izindaba - isilayishi samasondo umoba nebhakede elikhulu, isilayishi sikamoba esinamasondo amathathu
umoba yenza imishini yokulayisha isondo elincane ngebhakede likamoba
Imishini yokukhipha umoba okuhlanganisa yokusika umoba, isilayishi samasondo omoba, ugandaganda ngisho nesijusi somoba.
Namuhla sizokhuluma ngesilayishi samasondo somoba we-FORLOAD, esakhelwe phezu kohlaka olujwayelekile lokulayishwa kwamasondo amancane kodwa sisebenzisa ibhakede elikhulu lomoba elikhethekile, esingavumela umlimi ukuba alayishe kakhudlwana njengomoba nezinto zokwakha kanye.
Lolu hlobo lokulayisha amasondo omoba noma silubiza ngesibambi somoba noma umthwali, luhlomisa ngenjini enamandla ye-YUNNEI, amandla amakhulu okuguqula amasondo kanye namasondo amane asebenzisa isondo lephethini likagandaganda elingu-23.5-26.
I-FORLOAD yomkhiqizo wamasondo omoba isetshenziswa kakhulu eThailand, Malaysia, Indonesia, India, Brazil, Mexico ngisho nase-USA, isimo sezulu esihluke kakhulu kodwa yasebenzisa i-air conditioner, ukuze kwehliselwe isikhathi sokusebenza kwabalimi, isebenzise i-hydraulic joystick control, ifake isihlalo esishintshwayo. , ikhamera engemuva njll.
Uma usesha le mishini yokuvuna umoba sicela uthinte inkampani ye-FORLOAD.Futhi futhi singahlinzeka ngesilayishi esivamile samasondo amancane, isilayishi samasondo sikagesi, isilayishi samasondo e-backhoe, i-TLB, isilayishi sikagandaganda, isilayishi se-telescopic samasondo i-4WD forklift, i-forklift kagesi, i-motor grader, i-bulldozer, i-concrete mixer njll.